COD: Garowe Oo Laga Xusay Maalinta Deegaanka. – SBC
COD: Garowe Oo Laga Xusay Maalinta Deegaanka.
Wasaradda Deegaanka Daaqa duurjoogta iyo dalxiiska Dowladda Puntland ayaa maanta xustay maalinta deegaanka adduunka oo ku beegan 5-bishan June.
Xuska maalintan oo lagu qabtay xarunta wasaradda Deegaanka ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiir ku xigeenka Deegaanka Faarax Cali Cabdi, ku simaha agaasimaha guud ee wasaradda deegaanka Liibaan Maxamed Faarax,madaxa Hay’adda ADDESO ee Puntland Dr.Cabdi Daahir, Gudoomiyaasha gobaladda Puntland qaarkood iyo dadwayne kale.
Madaxa Hay’adda ADDESO ee Puntland gaar ahaan mashruuca deegaankaagu waa nolashaada (Environment is your Life) Dr.Cabdi Daahir ayaa dadka ku baraarujiyay in gacmaha la isku qabsado sidii looga hortagi lahaa waxyeelada deegaanka loo gaysto sidoo kale waxa uu tilmaamay dhankooda inay ka go’an tahay sidii wasaradda Deegaanka arrimahan loogala shaqayn lahaa.
Wasiir ku xigeenka Deegaanka Puntland Faarax Cali Cabdi ayaa ka hadlay sida loogu baahan yahay in la ilaaliyo deegaanka Puntland lagana hortago dadka dhirta goynayo, wasiir ku xigeenka ayaa sidoo kale ka hadlay howlaha kala duwan ee ay wasaraddu ka wado Gobaladda Puntland.
Sanad kasta Xiligan Oo Kale ayaa caalamka iyo Puntland-ba laga xusaa maalinta deegaanka, waxana lagu soo bandhigaa dhibaatooyinka deegaanka, sida looga hortago, iyo horumarka laga gaaray.